म जन्मदै काँग्रेस हूँ, मेरो रगतमा काँग्रेस छ « Kathmandu Pati
म जन्मदै काँग्रेस हूँ, मेरो रगतमा काँग्रेस छ
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ श्रावण आईतवार १२:२४
काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको उमेद्वारको विरुद्ध वागी उमेद्वार बनेको भनी मेरा विरुद्ध उजुरी परेको रहेछ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा म उमेद्वार नै होइन । तनहूँ क्षेत्र नं १ का करिव ८ हजार कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई सम्बोधन गरी तनहूँ क्षेत्र नं १ को उमेद्वार म गोविन्दराज जोशीलाई बनाउनुपर्दछ भनी केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी नदिई रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय संसदीय समितिमा निर्णय समेत नगराई मेरो जिल्लाको टिकट मनै वितरण गर्दछु भनी खाली टिकट लिई आफ्नै नाम र आफूखुशी अरूको नाम लेखी टिकट बाँडेका रहेछन् । यसरी संसदीय समितिमा निर्णय नगराई लिएको व्यक्तिको टिकट र उमेद्वारी आधिकारिक हुन सक्दैन भन्ने मेरो जिकिर छ ।
फेरी अहिले उहाले केन्द्रीय सभापति र केन्दी्रय समितिको निर्णयका विरुद्ध जुन किसिमको भेला गरी रहनु भएका् छ के तनहुको भेला त्यो भन्दा पनि वढी थियो र ? अफुले जे गरे पनि पार्टिको विधान अनुकुल हुने अरुले जे गर्दा पनि विधान विपरीत हन्छ र ? हामीले अहिले उहाले र उहाको नेतृत्वमा भए जतित गरेका थिएनौनी त । हामिलेत महामन्त्री सशांक कोइराला समेतका अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि भेटी जिल्ला अधिवेशनमा आमन्त्रण गरेका र सो भेटधाटमा म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहाँ भएको कुरा त्यतिखेरको भिडियोमा प्रसारित भएकै छ । आवश्यक भए म पेश गरौंला ।
(पार्टीबाट निष्काशित भएका गोविन्दराज जोशी काँग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री हुन् । उनले केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पेश गरेको स्पष्टीकरण हामीले जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरेका छौं ।)